Jizọs Ò Kwere Onye Ajọ Omume ahụ Nkwa na Ọ Ga-aga Eluigwe? | Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ, Sị
LIFE STORY “M Hụrụ, ma Aghọtaghị M”
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kisi Korean Krio Latvian Lithuanian Luo Malagasy Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Ihe mere ndị mmadụ ji ajụ ajụjụ a bụ n’ihi ihe Jizọs gwara onye ajọ omume a kpọgbukọrọ ya na ya. Jizọs gwara ya, sị: “N’ezie, ana m asị gị taa, Mụ na gị ga-anọ na Paradaịs.” (Luk 23:43) Ị̀ hụrụ na Jizọs ekwughị ebe Paradaịs ahụ ga-adị? Ma, ihe Jizọs gwara nwoke ahụ ọ̀ pụtara na ya na ya ga-eso laa eluigwe?
Ka anyị burugodị ụzọ chọpụta ma onye ajọ omume ahụ ò so ná ndị ga-aga eluigwe. A na-eji mmiri na mmụọ nsọ eme ndị nwere olileanya ịga eluigwe baptizim, ha aghọọ ndị na-eso ụzọ Jizọs e ji mmụọ nsọ mụọ. (Jọn 3:3, 5) Ihe ọzọ bụ na ndị ahụ ga-aga eluigwe ga na-akpa àgwà otú Chineke chọrọ. Dị ka ihe atụ, ha ga na-akwụwa aka ọtọ, ha ga-anọgide na-eme ezi ihe ma na-emere ndị mmadụ ebere. (1 Ndị Kọrịnt 6:9-11) Ha ga na-erubere Chineke na Kraịst isi ruo mgbe ha nwụrụ. (Luk 22:28-30; 2 Timoti 2:12) Ọ bụ naanị ndị mere ihe ndị a ka a ga-akpọlite n’ọnwụ, ọ bụkwa ha ga-aga eluigwe ka ha na Kraịst bụrụ ndị nchụàjà na ndị eze ndị ga-achị ụmụ mmadụ ruo otu puku afọ.—Mkpughe 20:6.
Ma a bịa n’ihe niile a Baịbụl kwuru, onye ahụ a kpọgbukọrọ ya na Jizọs achịtaghị ájá n’ihi na ọ bụ onye ajọ omume n’oge ọ dị ndụ, ruokwa mgbe ọ nwụrụ. (Luk 23:32, 39-41) N’eziokwu, ọ kwanyeere Jizọs ùgwù mgbe ọ gwara ya, sị: “Cheta m mgbe ị banyere n’alaeze gị.” (Luk 23:42) N’agbanyeghị nke ahụ, e meghị ya baptizim, ọ ghọkwanụghị onye na-eso ụzọ Jizọs e ji mmụọ nsọ mụọ, o jighịkwanụ ndụ ya mee ezi omume ma fee Chineke. Ì chere na Jizọs ga-ekwe onye ajọ omume ahụ nkwa na ya na ndị na-eso ụzọ Jizọs ndị ji ndụ ha niile fee Chineke ga-abụ eze n’eluigwe ebe yanwa na-enwekwanụghị mgbe o fere Chineke?—Ndị Rom 2:6, 7.
Dị ka ihe atụ: Weregodị ya na otu nwoke zuru gị ohi ma mechaa rịọ gị ka ị gbaghara ya, gị agbaghara ya ma kpebie na ị gaghị akpọrọ ya ndị uwe ojii. N’agbanyeghị na ị gbagharala ya, ị̀ ga-anwa anwa nyefee ya ahịa gị ka ọ zụwara gị ma ọ bụkwanụ gwa ya ka o lekọtawara gị ndị ezinụlọ gị? Ị gaghị eme otú ahụ. Ọ bụ naanị ndị ị tụkwasịrị obi ka ị ga-enye ụdị ọrụ a ka ha rụwara gị. Ọ bụ otú ahụ ka ọ dịkwa ndị ga-aga eluigwe. Ha ga-abụ ndị gosirila na mee elu mee ala, ha ga na-eme ihe Chineke chọrọ n’oge ha ga-achịwa ụmụ mmadụ. (Mkpughe 2:10) Ọ bụ eziokwu na onye ajọ omume ahụ ji obi ya niile rịọ Jizọs arịrịọ n’oge ọ na-aga ịnwụ, ma o nweghị ihe gosiri na mee elu mee ala, ọ ga na-eme uche Chineke.
Ma Jizọs ọ̀ gwara onye ajọ omume ahụ na ya na ya ga-anọ n’eluigwe n’ụbọchị ahụ ha nwụrụ? Ọ gwaghị ya otú ahụ n’ihi na Jizọs n’onwe ya agadịghị eluigwe n’ụbọchị ahụ. Kama nke ahụ, Jizọs nọrọ “n’ime ala,” ya bụ, n’ili, ruo ụbọchị atọ. (Matiu 12:40; Mak 10:34) Mgbe a kpọlitedịrị Jizọs n’ọnwụ, ọ nọrọ n’ụwa ruo ụbọchị iri anọ tupu ya alaa eluigwe. (Ọrụ Ndịozi 1:3, 9) Nke a na-egosi na onye ajọ omume ahụ na Jizọs agaghị eluigwe n’ụbọchị ahụ.
Ebe ọ dị otú ahụ, olee paradaịs onye ajọ omume ahụ ga-anọ na ya? A kpọlitechaa ya n’ọnwụ, ọ ga-anọ n’ụwa mgbe a ga-eme ka ụwa bụrụ paradaịs. Ọ ga-eso ná ndị Jizọs ga-achị. (Ọrụ Ndịozi 24:15; Mkpughe 21:3, 4) Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere paradaịs ahụ na ihe Chineke chọrọ gị n’aka, gwa Onyeàmà Jehova ọ bụla.
Jizọs Ò Kwere Onye Ajọ Omume ahụ Nkwa na Ọ Ga-ala Eluigwe?